Mukupedzisira, HarmonyOS yakazove yashandiswazve Android 10 | Linux Vakapindwa muropa
Mukupedzisira, HarmonyOS yakazove yashandiswazve Android 10
Muongorori kubva arstechnica yakaburitsa pachena kuti yaikwanisa kutora chikamu muchirongwa cheyedzo ye SDK gadzira kunyorera kwepuratifomu 2.0 HarmonyOS, Yakagadzirwa naHuawei seimwe nzira kune iyo Android chikuva.
Uye ndizvozvo kunyange Huawei akange ataura kubva pakutanga kuti HarmonyOS chirongwa chakasiyana uye zvakasiyana zvachose kubva kuApple neIOS, chokwadi ndechekuti hazvina kudaro, nekuti kana uchiita bvunzo pane SDK emulator zvinobva zvaratidza kuti HarmonyOS idombo re Android 10, inowirirana neema interface zvinhu, mashandiro uye masevhisi masevhisi.
Mushure mekuwana mukana weHarmonyOS kuburikidza neyakaipisisa kunyoresa maitiro, kumisikidza iyo SDK uye emulator, uye nekunyatso kuongorora madhizaini ekuvandudza, ini handikwanise kusvika kune chero mimwe mhedziso: HarmonyOS inonyanya kuita forogo yeApple. Iyo nzira iyo Huawei inorondedzera iyo inoshanda sisitimu kune yekudhinda uye mune yekuvandudza madhiza inoita kunge isina zvakawanda zvekuita neizvo iyo kambani iri chaizvo kutumira. Dhizaini yekuvandudza inoita kunge yakanyorwa padhuze nechinangwa kuvhiringidza muverengi; Chero chaiyo yekutumira kodhi snippet yaunosimudza girazi rinokudza rinotaridzika senge Android isina shanduko huru.
Mutsara wekuti "nyepera kusvikira wauwana" unowanzo kupihwa sezano rinokurudzira, asi handisati ndamboona richishandiswa kuvandudzwa kweOS kare. Kana iwe wakamboona yazvino Android Huawei foni, HarmonyOS yakanyanya kufanana… nedzimwe tambo dzakachinjwa. Saka kunyangwe pasina zvakawanda zvitsva zvekuona, tinogona kumbotarisa kuHarmonyOS uye debunk zvimwe zvezvirevo zveHuawei nezve ayo 'nyowani nyowani' anoshanda system.
Iyo sisitimu inoshandisa iyo "EMUI" goko, qEU zvakare inoisa pane Android-based Huawei zvishandiso.
Iyo kambani inoti inoshandisa iyo "EMUI" chiteshi yeHarmonyOS, asi zvimwe zvese zvinhu hazvizivikanwe kubva kuApple zvakare.
Chinyorwa ichi chinotaura kuti kodhi yekodhi yeHarmonyOS IoT yakatumirwa kuOpenHarmony repository haina kuwanda nenzira ipi neipi inopihwa muHarmonyOS 2.0 emulator.
Mune kesi yekutanga, iyo sisitimu yakavakirwa pane yayo yega LiteOS microkernel, uye mune iyo kesi ye HarmonyOS 2.0, Linux kernel based Android 10 system nharaunda inopihwa uye seti yeyakajairwa Android kunyorera. Misiyano inoonekwa yakaderedzwa kune shanduko yechiratidzo. Iko kuchiri kusiri kuongororwa kweiyo yepasi-chikamu chikamu masisitimu.
Mune dhijitari yeruzivo dialog, chikuva chinoonekwa sevhezheni 10, inotaridzika senge Android 10, kwete HarmonyOS 2. Chechitatu-bato mafomu anoratidza system ruzivo anozivisa nharaunda se "Android 10 Q".
Uyezve, iyo IDE inopihwa mu SDK yakafanana mune inowirirana uye nzira dzekushanda ku Android Studio uye zvakare yakavakirwa paJetbrains IntelliJ IDE uye inoshandisa iyo Gradle compilation system.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mukupedzisira, HarmonyOS yakazove yashandiswazve Android 10
Imwe kambani yekuChina ichiti yakagadzira chimwe chinhu chiri kopi yeimwe chigadzirwa?
Ndiri kushamisika! Hapana akambotaura
Izvo zvinotonhorera kana Apple ichizviita
Uye chii chawaitarisira kuti chive, chinzvimbo chemuchadenga? Ehe saizvozvo iri reworked Android. Nhasi hapana chakagadzirwa. Pane kutsoropodza kwakawanda kuti kana Google ichizvitonga zvakadaro uye zvakadaro, asi hapana munhu ane mazai ekugadzira chero chinhu chitsva.
AWS Inosheedzera Yakavhurwa Sosi Yeforks yeElasticsearch neKibana
Iyo Sudo kudzvinyirira inobatawo macOS, uye haisati yataridzirwa